အခမဲ့ Forex အချက်ပြဝန်ဆောင်မှု | အခမဲ့ Online Forex Trading Signal များ
အခမဲ့ Forex အချက်ပြဝန်ဆောင်မှု
အခမဲ့ Online Forex Trading Signal များ
ဒါဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူသစ်တစ်ခုထိတ်လန့်အဖြစ်လာလိမ့်မည်, သို့သော် Forex သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစျေးကွက်ဖြစ်သည်. Forex သည်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ရေးအသုံးအနှုန်း၏အတိုကောက်ပုံစံဖြစ်သည်, သို့မဟုတ်ငွေကြေးရိုးရှင်းစွာ. ဤဝေါဟာရများသည်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ငွေတန်ဖိုး၏ငွေကြေးတန်ဖိုးကိုရည်ညွှန်းသည် (တိုင်းပြည်၏အကြီးဆုံး Single- တန်ဖိုးကိုအားဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်) နှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနိုင်ငံသားဖြစ်သည့်တိုင်းပြည်ကအသုံးပြုသည့်ငွေကြေးယူနစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကတိုင်းတာသည်.
Forex ကိုအကြီးဆုံးစျေးကွက်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်အတိုင်းအတာသည်ကုန်သွယ်မှု၏တန်ဖိုးတန်ဖိုးဖြစ်သည်, ထိုသို့စိတ်ကူးနိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးမျိုးအားဖြင့်အသုံးပြုသည်, တစ် ဦး ချင်းစီထံမှ (ဘယ်သူဟာပွဲစားတွေ၊ ဘဏ်တွေကိုသုံးတာလဲ) နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများသို့အစိုးရများသို့. Forex သည်အလွန်များပြားသောငွေဖြစ်လွယ်မှုနှင့်အချိန်စွမ်းအားကြောင့်အလွန်လူကြိုက်များသည် (ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်တာကုန်သွယ်ရေးစတော့ဈေးကွက်ကြီးသုံးခုနှင့်အတူ, တစ်နာရီတိုင်းတွင်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နိုင်သည်). ငွေဖြစ်လွယ်ဆိုသည်မှာဈေးကွက်ငွေဖြစ်လွယ်မှုအတွက်တိုတောင်းသောအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်, စျေးနှုန်းသိသိသာသာအတက်အကျကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမရှိဘဲလျင်မြန်စွာဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်းချနိုင်စွမ်းကိုရည်ညွှန်းသည်. တိုင်းပြည်များအတွက်ငွေကြေးအဖြစ်အများဆုံးပြည်တွင်းရေးကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ် (ပြည်တွင်း) အချက်များထက်ပြင်ပသူတွေကိုထက်, Forex သည်အလွန်အထိတ်တလန့်ရောင်းရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောစီးဆင်းမှုကိုမခံရပါ.
တင်ခဲ့သည် Forex Trading EA, eBooks များ, ဗွီဒီယိုများ, စာအုပ်များ	| Tagged ငွေကြေးလဲလှယ်မှု, နိုင်ငံခြားငွေကြေး, နိုင်ငံခြားသုံးငွေ, Forex, Forex စျေးကွက်, Forex ကုန်သွယ်	| မှတ်ချက်တစ်ခုချန်ထားပါ
Forex Trading အတွက်အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု
အချိန်အများစု, သင်အရောင်းအ ၀ ယ်အတွက်အသုံးပြုသောမည်သည့်ပလက်ဖောင်းနှင့်စတော့ဈေးကွက်နှင့်မည်မျှအတွေ့အကြုံရှိပါသလဲ. သင်ဆုံးရှုံးမှုကို minimize လုပ်ဖို့သင့်လျော်သောအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုခြေလှမ်းများကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်, အဆိုးဆုံးအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပြင်ဆင်ထားဘူး. Forex ကုန်သွယ်၌တည်၏, အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း၌မည်သည့်လေသည်မည်သည့်လေမှုတ်မည်ကိုခန့်မှန်းရန်ခက်ခဲသည်. ထို့ကြောင့်, အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတော်လေးအရေးကြီးသောဖြစ်လာသည်. Forex ကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင်၏ရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်ပြီးတွက်ချက်။ ရသောစွန့်စားရမှုများနှင့်သင်၏ forex ဆက်ဆံမှုကိုရုတ်တရက်နိဂုံးချုပ်ရန်မလိုပါ.
အားလုံးမြို့တော်အတူတူမဖြုန်းပါနဲ့- သာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း 0.5 ရာခိုင်နှုန်းမှ3တစ်ချိန်ကသင့်ရဲ့စုစုပေါင်းအရင်းအနှီး၏ရာခိုင်နှုန်း. ၎င်းသည်သင့်အတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောရန်ပုံငွေများကိုဖန်တီးပေးလိမ့်မည်။ သင်၏ရန်ပုံငွေများကိုမိုးရာသီတွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်လိမ့်မည်.
ဖြန့်ဝေ- သင်၏အရင်းအနှီးအားလုံးကိုငွေကြေးတစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုတည်းပေါ်တွင်မတင်ပါနှင့်. သင်စောင့်ရှောက်ရန်ရှိပါက $10000 တစ် ဦး အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ - EUR Forex များအတွက်ရှယ်ယာမှာ 1 မိနစ်အချိန်, သင်ကိစ္စတစ်ခု၌သင်၏ပိုက်ဆံအားလုံးဆုံးရှုံးရန်အခွင့်အလမ်းပိုများသည် 60 စက္ကန့်ပိုင်း. ဤကိစ္စသည်သင်၏ကိစ္စမဟုတ်ပါ. ဒီထက်ပိုပြီးမသုံးပါနဲ့ 10 ဒါမှမဟုတ် 15 တ ဦး တည်းငွေကြေး၌သင်တို့၏မြို့တော်ရာခိုင်နှုန်း.
Multiple Time Frame Trading- ဒါကသင်အန္တရာယ်ကိုနည်းနိုင်သမျှနည်းစေတယ်. ငွေကြေးအားလုံးကိုမသုံးသင့်တဲ့နည်းလမ်းပဲ, ထိုနည်းတူစွာသင်၏အချိန်ကာလတစ်ခုတည်းကိုသာမဖြုန်းသင့်ပါ. ဖြုန်းတီးရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် 15 သေးငယ်တဲ့အချိန်ဘောင်အပေါ်ရာခိုင်နှုန်း, 35 အလယ်အလတ်အချိန်ဘောင်အပေါ်ရာခိုင်နှုန်းနှင့် 50 စီးဆင်းမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်အခွင့်အလမ်းပိုများလေလေပိုမိုကြာရှည်သောကာလတွင်ရာခိုင်နှုန်းသည်. ပေါင်းစပ်မှုသည်သင်ရွေးချယ်သောနှုန်းအတိုင်းဖြစ်နိုင်ပြီးသင်အထူးပြုသောကုန်သွယ်မှုအမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်.
အန္တရာယ်နှုန်း- စွန့်စားရမှုနှုန်းထက်ပိုသောကုန်သွယ်မှုတစ်ခုကိုဘယ်တော့မျှမရွေးချယ်ပါနှင့်5ရာခိုင်နှုန်း. တကယ်တော့, အဖြစ်အနိမ့်ကစောင့်ရှောက်ခြင်း2ရာခိုင်နှုန်းကအတော်လေးအကျိုးရှိသည်. ပိုမိုမြင့်မားသောစွန့်စားမှုအခွင့်အလမ်းများသည်အကျိုးအမြတ်ရှိပုံရသည်, သင်စျေးကွက်အတွင်းအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အခြေအနေများကိုသာဂရုတစိုက်လေ့လာပြီးသင်၏ငွေကိုရှယ်ယာတင်ရမည်.
ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှု- သင်လုပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ရပ်တန့်ရေးဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုကိုဖန်တီးသောအခါ, သင်ရုတ်တရက်သို့မဟုတ်မကြုံစဖူးလေးလံသောဆုံးရှုံးမှုမခံစားရဘူးဆိုတာသေချာတယ်. ရပ်တန့်မှုဆုံးရှုံးခြင်းသည်စျေးကွက်တွင်မဖိတ်ခေါ်ဘဲသေဆုံးရန်အခွင့်အလမ်းများကိုလျော့နည်းစေသည်.
တင်ခဲ့သည် Forex ထရေးဒင်းစိတ်ပညာ	| Tagged အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု	| မှတ်ချက်တစ်ခုချန်ထားပါ
Forex ကုန်သွယ်နေစဉ်, ကုန်သွယ်ရေးအတွက်လိုအပ်သောအချိန်ကာလသည်ကုန်သည်အသစ်များအတွက်ပြanနာဖြစ်လာနိုင်သည်. များသောအားဖြင့်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထသောကုန်သည်များသည်များသောအားဖြင့်ယေဘုယျအားဖြင့်နာရီပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းရပြီး၊. သူတို့သည်များသောအားဖြင့်အတွေ့အကြုံနည်းပါးသောကြောင့်အမြန်ငွေရှာလိုကြသည်. သို့သော်ငြားလည်း, ၎င်းကိုကျောင်းဟောင်းနှင့်ရှေးရိုးစွဲထားလိုသည့်ကြာရှည်စွာရွေးချယ်လိုသောကုန်သည်များစွာရှိသည် 1 နာရီသို့မဟုတ်ပင်4နာရီ. ဤအချက်က၎င်းတို့အားသူတို့ကုန်သွယ်လိုသောငွေကြေးနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျမှန်ကန်စွာဖတ်ရှုနိုင်ပြီး၎င်းသည်သူတို့ဆန္ဒရှိသည့်အတိုင်းအတိအကျလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်.
သို့သော်, ကုန်သည်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်, ကြီးမားသည်ဖြစ်စေသေးငယ်သည်ဖြစ်စေ၊, အသစ်သို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံရှိ, ပထမ ဦး စားပေးအကြိမ်များစွာအတွက်ကုန်သွယ်မှုဖြစ်သင့်သည်. ဒီပြီးသွားတဲ့အခါ, သငျသညျအပေါ်ဆင်းသက်ရန်လုံခြုံရေးပိုက်ကွန်ရ. မည်သည့်တိကျသောအချိန်သတ်မှတ်ချက်ကိုသင်ရွေးချယ်သည်ကိုသင်အမှန်တကယ်မည်မျှပြုလုပ်လိုသည်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးစျေးကွက်တွင်သင်၏ကာလရှည်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကိုမည်သို့ရွေးချယ်သနည်းပေါ်တွင်မူတည်သည်. သင်၏အချိန်ကာလကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ငွေကြေးများပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ရန်အချိန်ကာလတစ်ခုအကြားကွာဟမှုများလုံလောက်စွာထားခြင်းသည်အမြဲတမ်းကောင်းသည်.
တင်ခဲ့သည် Forex ကုန်သွယ်မှုစနစ်	| Tagged မျိုးစုံအချိန်ဘောင်ကုန်သွယ်, မျိုးစုံအချိန်	| မှတ်ချက်တစ်ခုချန်ထားပါ
သင်၏ Forex Trading စနစ်ကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်မည်နည်း?
Forex trading တွင်မတူကွဲပြားသောနည်းစနစ်များနှင့်နည်းဗျူဟာများရှိသည်. အချို့သောကုန်သည်များက၎င်းကိုအွန်လိုင်းမှအခမဲ့ပေးသည်, Forex trading စနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ အခြားအကြံဥာဏ်များကိုလည်းဝယ်ယူနိုင်သည်, သို့သော်, Forex ကုန်သွယ်မှုအပေါ်ဗဟုသုတကျယ်ပြန့်စွာမျှဝေသည်, အောင်မြင်မှုရရန်ရည်မှန်းထားသည့်အတွေ့အကြုံရှိရန်လိုအပ်သည်.
Forex အရောင်းအဝယ်သည်ငွေရှာခြင်းမျှသာမဟုတ်ပါ, ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အများစုကအလွန်ကြီးစွာသောစိတ်အားထက်သန်မှုစဉ်းစားပါ. ဤကုန်သွယ်မှုပုံစံတွင်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးစွမ်းရည်များတိုးတက်ရန်နှင့်သင်ယူရန်နှင့်သင်၏ဘဏ္financialာရေးအောင်မြင်မှုအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်အခွင့်အလမ်းများကိုမျှော်လင့်ပါ. အချိန်အားဖြင့်သင်သည်သင်၏ Forex ကုန်သွယ်စနစ်များကိုဖွံ့ဖြိုး, သင်ကြိုတင်အချိန်ဇယား၏ entry ကိုအချက်များကိုအောင်မြင်ရန်ပါလိမ့်မယ်, သင်၏အများဆုံးအမြတ်အစွန်းကိုကာကွယ်ရန်နှင့်အတုအယောင်ဝင်ရောက်မှုနှင့်ထွက်ပေါက်ညွှန်ပြချက်များကိုရှောင်ရှားရန်ထွက်ပေါက်အချက်များ. သင်ဤအမှုအရာအောင်မြင်ရန်ပါ, ကျိန်းသေသင်တစ် ဦး အလွန်ကုန်ကျ - ထိရောက်သောကုန်သွယ်စနစ်ကရှိသည်.
တင်ခဲ့သည် Forex ကုန်သွယ်မှုစနစ်	| Tagged EMA, အဆရွေ့လျားပျမ်းမျှ, Forex ကုန်သွယ်စနစ်များ, MACD, parabolic SAR, ရိုးရှင်းသောရွေ့လျားနှုန်း, အထက်တန်းကျောင်း	| မှတ်ချက်တစ်ခုချန်ထားပါ
Automated Forex Trading Robot ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း?
အမှာစာဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း, အလိုအလြောကျနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုစျေးကွက် core ကိုအစီအစဉ်ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးချွတ်သတ်မှတ်ထားကြသည်. ဤသည်ကိုကုန်သွယ်ရေးအတွက်မဟာဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် forex auto trading ဟုခေါ်သည်. ဒီမဟာဗျူဟာနှစ်ခုအဓိကအမျိုးအစားများရှိပါတယ်. အလိုအလျောက် Forex Trading စက်ရုပ်နှင့် signal ကို -based forex အော်တိုကုန်သွယ်.
ဤဆောင်းပါး၌, ကျနော်တို့အလိုအလျောက် Forex ကုန်သွယ်စက်ရုပ်အကြောင်းဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်, အရာအနက်ရောင် - သေတ္တာသို့မဟုတ် algorithmic ကုန်သွယ်ကဲ့သို့တူညီသော features တွေရှိပါတယ်. အော်တိုကုန်သွယ်မှုဤအမျိုးအစား၌တည်၏, ကွန်ပျူတာထဲမှာတစ်ခု algorithm ကိုအမိန့်၏ဝိသေသအပေါ်ဆုံးဖြတ်သည်, အရာစျေးနှုန်းပါဝင်သည်, အချိန်ကိုက်သို့မဟုတ်အရေအတွက်နှင့်အလိုအလျှောက်ထုံးစံ၌အမိန့်ကိုချွတ်သတ်မှတ်. အသုံးပြုသူများကိုပရိုဂရမ်၏နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters များကိုပြောင်းလဲမှတဆင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခွင့်ပြုခဲ့ပေမယ့်, သို့သော်, ပရိုဂရမ်သည်အခြားထိန်းချုပ်မှုများကိုစီမံသည်.
တင်ခဲ့သည် Forex ထရေးဒင်း software ကို	| Tagged Forex Trading စက်ရုပ်, Forex အော်တိုကုန်သွယ်, Forex drawdown, Forex ထရေးဒင်းစက်ရုပ်, အမြတ်အစွန်း Forex စနစ်	| မှတ်ချက်တစ်ခုချန်ထားပါ
Forex trading သည်ဘဏ္isာရေးဈေးကွက်တွင်ပါ ၀ င်ရန်အန္တရာယ်များပြီးအရှိန်အဟုန်မြင့်မားသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်, ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းရန်အချိန်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် ၀ င်ရောက်လာသူများသည်ငွေကြေးစျေးနှုန်းဇယားများကိုသာအားကိုးကြသည်. Forex မဏ္pointsိုင်အချက်များသည်ကုန်သွယ်ရေးသမားအများစုအသုံးပြုသောအနာဂတ်ငွေလဲလှယ်နှုန်းအတွက်အနာဂတ်အလှည့်အပြောင်းကိုခန့်မှန်းရန်သုံးသောဇယားဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မဟာဗျူဟာများစွာထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။. ၎င်းတို့ကိုမဏ္pointsိုင်အမှတ်များဟုခေါ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤစျေးနှုန်းအဆင့်တွင်စျေးနှုန်းများသည်ကုန်သွယ်ရေးနေ့အတွင်းပြောင်းပြန်သို့မဟုတ်မဏ္mayိုင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်.
ဤအချက်များကိုသင်္ချာနည်းအရတွက်ချက်သည်, အမြင့်ဆုံးနှင့်ယခင်နေ့၏စျေးနှုန်းများ. ၎င်းတို့ကိုနေ့စဉ်တွက်ချက်သည်, အပတ်စဉ်သို့မဟုတ်လစဉ်မဏ္pိုင်များ, ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောဆက်လုပ်ခြင်း (သို့) ပြောင်းပြန်လှန်တပ်ဆင်ခြင်းများအပြင်အမြတ်ပစ်မှတ်များ (သို့) loss loss positioning ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်သင်အသုံးချနိုင်သောသိသာထင်ရှားသည့်ခုခံမှုသို့မဟုတ်ထောက်ခံမှုအချက်များကိုပေးသည်။. ကုန်သည်တော်တော်များများသည်သူတို့၏နေ့စဉ်ကုန်သွယ်မှုတွင် Forex မဏ္pointsိုင်အမှတ်များကိုအသုံးပြုကြသည်, ထိုသို့မြင့်မားတဲ့သူ့ဟာသူသက်သေပြခဲ့သည်. ကုန်သည်များအသုံးပြုသည့်လူကြိုက်အများဆုံးအချက်များဖြစ်သည်; ကြမ်းပြင်, Woodies, ကရဲ, နှင့် Tom Demark ရဲ့မဏ္otsိုင်. ဒီမှာမဏ္theိုင်အမှတ်ကိုတွက်ချက်ရန်သင့်အားရှင်းပြပါမည်, ၎င်းကိုသိရှိခြင်းသည်ယေဘူယျအားဖြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ပိုမိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်. ဆက်ဖတ်ပါ →
တင်ခဲ့သည် Forex နည်းပညာ & အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ	| Tagged Forex ငွေကြေး, Forex မဏ္Pointိုင်အချက်များ, Forex ကုန်သည်များ, မဏ္Pointိုင်အမှတ်, တွမ် Demark ရဲ့မဏ္otsိုင်	| မှတ်ချက်တစ်ခုချန်ထားပါ
ဘာကြောင့် Forex Trading တွင်ဆုံးရှုံးမှုကိုရပ်တန့်ရန်လိုအပ်သည်?
အမှန်တရားကတော့ Forex trading ဟာတစ်ခါတစ်လေမှာလိုချင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရွေ့သွားတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကုန်သွယ်မှုတွေလျော့နည်းသွားစေမယ့်အခြေအနေကိုခြိမ်းခြောက်နိုင်တဲ့အချိန်တွေမှာ Forex stop loss option ကိုသုံးဖို့လိုတယ်။. ကျနော်တို့ကသူ့ရဲ့ကျောက်ကပ်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ဘူး, စီးပွားရေးကိုတကယ်စိန်ခေါ်မှုအောင်. အခြေအနေများသည်အဓိကစီးပွားရေးဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်ငွေကြေးစျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုများနှင့်ဆင်တူသည်. ထို့ကြောင့်, စျေးကွက်ကသူ့မျက်နှာသာကိုဆန့်ကျင်လာသောအခါအလွန်ပြaticနာအနေအထား၌တ ဦး တည်းကိုရှာဖွေပုံမှန်မဟုတ်သောမဟုတ်ပါဘူး; သို့သော်, ဤအခြေအနေ၏ဝဘ်ဆိုက်တွင်မကျရောက်စေရန်သင်၏လှုပ်ရှားမှုကိုမည်သို့ထိန်းချုပ်ရမည်ကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်.
တစ်နည်းမှာ Forex stop loss ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်. ဒါကိုမင်းဘယ်လိုလုပ်လုပ်မှာလဲ? တကယ်တော့, သင်၏ဆုံးရှုံးမှုကိုချက်ချင်းဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်စီးဆင်းခြင်းနှင့်အတူသွားခြင်းနှင့်နောင်လာမည့်နေ့များ၌စျေးကွက်သည်သင့်မျက်နှာသာရရန်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်လက်ချောင်းများကိုဖြတ်ကျော်သကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကရှင်သန်နေဖို့လိုတယ်, သငျသညျနေ့တိုင်းစျေးကွက်လမ်းကြောင်းနှင့်အတူစီးအဖြစ်, သင်ဤအတွေ့အကြုံ၌အောင်မြင်ရန်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်အတွေ့အကြုံနှင့်သင်ယူမှုများပိုမိုရရှိမည်ဖြစ်သည်.
တင်ခဲ့သည် Forex ထရေးဒင်း ABC ရုပ်သံ	| Tagged Forex ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှု, GBP / JPY, GBP / USD, နံနက်ကြယ်ပွင့်မီးခွက်, ဆုံးရှုံးမှု technique ကိုရပ်တန့်	| မှတ်ချက်တစ်ခုချန်ထားပါ
Divergence ဆိုသည်မှာတိုက်ရိုက်ကိုးကားချက်များနှင့် FX ကုန်သည်များနှိုင်းယှဉ်သောလှိုသည်အခြားလမ်းကြောင်းသို့သွားသောအခါနိဂုံးချုပ်သည့်နည်းစနစ်ဆိုင်ရာစျေးနှုန်းညွှန်းကိန်းဖြစ်သည်။. က Forex ကုန်သွယ်မှကြွလာသောအခါ, မတူကွဲပြားအချက်ပြမှုများကရှေ့သို့သို့မဟုတ်နောက်သို့ဖြစ်စေလမ်းကြောင်းသစ်အတွက်လာမည့်ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူပေါ်ပေါက်ပါတယ်. ကုန်သည်တစ် ဦး ကမတူကွဲပြားသောလမ်းကြောင်းအပေါ်လင်းယုန်မျက်စိစောင့်ကြည့်သောအခါ, ၎င်းသည်ကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်းတစ်ခုသတိပြုမိကြောင်းညွှန်ပြချက်တစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်.
မတူကွဲပြားကုန်သွယ်စနစ်တကျအသုံးပြုသွားမည်အခါ, ၎င်းသည်ကုန်သည်တစ် ဦး အားအမြတ်အစွန်းရရှိစေသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်. အနိမ့်ဆုံးအနိမ့်ဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပြီးအနိမ့်ဆုံးအနိမ့်ဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။.
တင်ခဲ့သည် Forex နည်းပညာ & အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ	| Tagged ကုန်စည်ဒိုင်ရုပ်သံလိုင်းအညွှန်းကိန်း, Forex ညွှန်ပြချက်, FX ကုန်သည်, MACD, ပုံမှန်မတူကွဲပြား, ဆွေမျိုးအစွမ်းအညွှန်းကိန်း, RSI, Stochastic	| မှတ်ချက်တစ်ခုချန်ထားပါ
Divergence ဆိုသည်မှာကုန်ဈေးနှုန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောတိုက်ရိုက်ကိုးကားချက်နှင့်လှိုကိုကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းများသို့သွားသောအခါဖြစ်ပေါ်သောနည်းပညာဆိုင်ရာစျေးနှုန်းညွှန်းကိန်းဖြစ်သည်။. မတူကွဲပြားအချက်ပြမှုများသည်လာမည့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုပြောင်းလဲစေသည်. သူတို့ကဖြစ်စေတိုးတက်သောသို့မဟုတ် retrogressive ဖြစ်နိုင်သည်. မတူကွဲပြားအရေးကြီးသောကြောင့်သင်ကသူတို့ကိုကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်လျှင်, သင်အမြတ်အစွန်းကုန်သွယ်မှုနိုင်သည့်အခါသင်သိ.
မတူကွဲပြားစျေးနှုန်းအရေးယူမှုနှင့် RSI ကဲ့သို့လှိုညွှန်းကိန်းများကလွှမ်းမိုးနေသည်ကတည်းက, CCI သို့မဟုတ် MACD, စျေးကွက်သည် ဦး တည်ချက်ကို ပြောင်းလဲ၍ အမြတ်ရရန်မိမိကိုယ်ကိုနေရာချမည့်အချိန်ကိုသင်သိသည်. မတူကွဲပြားမှုများကိုအသုံးပြုခြင်း၏အဓိကအားသာချက်မှာ၎င်းတို့ကိုအနည်းဆုံးစွန့်စားမှုများဆွဲဆောင်နိုင်သောထိပ် (သို့) အောက်တွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်. ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည် bearish သို့မဟုတ် bullish စျေးကွက်တွင်အဆင်ပြေသည်ကိုဆိုလိုသည်. မတူကွဲပြားသောကုန်သည်များ၏အဓိကအချက်မှာဇယားများပေါ်တွင်ဖန်တီးထားသောမြင့်မားသောအမြင့်သို့မဟုတ်နိမ့်ကျသောနိမ့်ကျမှုကိုဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်. ၎င်းသည်သင့်အားဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းနေသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောအရာတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကူညီသည့်အဖိုးတန်သောနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်.
တင်ခဲ့သည် Forex နည်းပညာ & အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ	| Tagged CCI သို့မဟုတ် MACD, မတူကွဲပြားကုန်သည်များ, ဝှက်ထားသော bearish မတူကွဲပြား, လျှို့ဝှက်မတူကွဲပြား, မြင့်မားသောအမြင့်ဆုံး, အနိမ့်အနိမ့်, လှိုညွှန်ပြချက်, စျေးနှုန်းအရေးယူ, RSI	| မှတ်ချက်တစ်ခုချန်ထားပါ
တစ် ဦး Forex ဦး ခေါင်းနှင့်ပခုံးကဘာလဲ?
Forex ကုန်သည်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ကုန်သွယ်နေစဉ်မတူညီသောနည်းစနစ်များနှင့်ကိရိယာများကိုအသုံးပြုကြသည်. ဤသည်ကားချပ်ပုံစံများပါဝင်သည်, ဆော့ဝဲလ်နှင့်အခြား. ဤဆောင်းပါး၏ရည်ရွယ်ချက်သည်, ကျနော်တို့ Forex ခေါင်းကိုနှင့်ပခုံးဇယားပုံစံကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်. ၎င်းသည်ကုန်သည်တိုင်းသိသင့်သောအရေးကြီးသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်. သငျသညျထိရောက်စွာဒီ technique ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမည်ကိုနားလည်လျှင်, သင် Forex ကုန်သွယ်မှုမှအမြတ်အစွန်းအများကြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်.
Forex စျေးကွက်များရှိငွေကြေးလှုပ်ရှားမှုများကိုများသောအားဖြင့်ဇယားများနှင့်အမျိုးမျိုးသောကုန်သွယ်ရေးဆော့ဖ်ဝဲများ၏အကူအညီဖြင့်ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီးနားလည်နိုင်သည်. ကုန်သွယ်သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းပြီးနောက်, သငျသညျဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်နားလည်ရန်အချို့သောပုံစံများကိုသုံးနိုင်သည်. များစွာသောအောင်မြင်သောကုန်သည်များသည်စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမိမိတို့၏ရွေ့လျားမှုကိုအနုစိတ်စီစဉ်ရန်နှင့်ကုန်သွယ်မှုဇယားများရှိဂရပ်ဒေတာပေါ် အခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အသုံးပြုသည်. ကုန်သွယ်တဲ့အခါ, လက်ရှိငွေကြေးလမ်းကြောင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အကြောင်းအရင်းအပေါ် မူတည်၍ ဇယားများကိုသင်ရွေးချယ်လိမ့်မည်. ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောင်းပြန်ပုံစံများသည်အဆုံးမှတ်သို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ပေါ်လာလိမ့်မည်.
တင်ခဲ့သည် Forex နည်းပညာ & အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ	| Tagged ဇယားပုံစံ, Forex ဦး ခေါင်းနှင့်ပခုံး, ဦး ခေါင်းနှင့်ပခုံးများ, ပြောင်းပြန်ပုံစံများ	| မှတ်ချက်တစ်ခုချန်ထားပါ
App Software ကိုဒေါင်းလုပ်
Android Windows မက်
Android App ဒေါင်းလုပ်
Windows Software ကိုဒေါင်းလုပ်
သငျသညျညွှန်ပြဇစ်ဖိုင်များကို download လုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်, အခြားဘရောင်ဇာများသုံးကြည့်ပါ.
အခမဲ့ Forex ကုန်သွယ်အချက်ပြမှုများ
Forex Duality ဒေါင်းလုပ်
အချက်ပြအရောင်းအ ၀ ယ်အချက်များ
Forex အချက်ပြပေးသူများ eBook
PDF - အကောင်းဆုံး Forex Signal Provider များကိုရှာဖွေနည်း
ECN Forex ပွဲစား
Forex အညွှန်းကိန်း, EAs, ရေလက်ကြား
Forex နည်းပညာ & အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
Forex ထရေးဒင်း ABC ရုပ်သံ
Forex Trading EA, eBooks များ, ဗွီဒီယိုများ, စာအုပ်များ
Forex ထရေးဒင်း software ကို
MetaTrader5Forex အညွှန်းကိန်း, EAs, ရေလက်ကြား
MT4 Forex အညွှန်းကိန်း, EAs, ရေလက်ကြား
MT5 Forex အညွှန်းကိန်း, EAs, ရေလက်ကြား
8.5"x11" စာအုပ်စင် စီးပွားရေး & စီးပွားရေး စီးပွားရေး & စီးပွားရေး / အီး - ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး - အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှု စီးပွားရေး & စီးပွားရေး / E-commerce / အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှု စီးပွားရေး & စီးပွားရေး / ဘဏ္ာရေး / အထွေထွေ စီးပွားရေး & စီးပွားရေး / နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စီးပွားရေး & စီးပွားရေး / နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှု စီးပွားရေး & စီးပွားရေး / အထွေထွေ စီးပွားရေး & စီးပွားရေး / အိမ်အခြေခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စီးပွားရေး & စီးပွားရေး / ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ & လုံခြုံရေး စီးပွားရေး / စီးပွားရေး စီးပွားရေး / စီးပွားရေး / ဘဏ္ာရေး CreateSpace လွတ်လပ်သောထုတ်ဝေရေးပလက်ဖောင်း E-commerce - အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှု ebook ပညာရေး / ဘဏ္ာရေး စသည်တို့ ထူးအိမ်သင် ဘဏ္ာရေး & စာရင်းကိုင် ဘဏ္ာရေး - အထွေထွေ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ နိုင်ငံခြားငွေလဲအနာဂတ် နိုင်ငံခြားသုံးငွေစျေးကွက် Forex Forex ကုန်သွယ် Forex ကုန်သွယ်မှုစနစ် အထွေထွေ နိုင်ငံတကာဘဏ္financeာရေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု & အာမခံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ & လုံခြုံရေး - အထွေထွေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ & လုံခြုံရေး - ရှယ်ယာများ The Rich Rich နှင့်ဆက်သွယ်ပါ ဘယ်နေရာမှာမဆိုနေထိုင်ပါ McGraw- ဟေးလ်ပညာရေး အထွေထွေ / အထွေထွေ ကိုယ်ပိုင်ဘဏ္Financeာရေး - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မဏ္ivိုင် - ပွိုင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မမသာစျေး ထင်မြင်ချက် စတော့ရှယ်ယာ ကုန်သည် X ကုန်သွယ်ရေး Wiley
1000pip Builder ဒေါင်းလုပ်
Pay & Get Paid Worldwide Sign Up Through This Link & Earn $25* သင်လက်ခံတခါ $100 ငွေပေးချေမှု၌တည်၏
အခမဲ့ Forex အချက်ပြဝန်ဆောင်မှု	မူပိုင်ခွင့် © 2010-2022